DEBIAN Post Installation Guide 8/9 - 2016 - Fizarana II | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny tapany voalohany amin'ny Torolàlana momba ny fametrahana DEBIAN Post 8/9 - 2016 Niresaka momba ny fanatsarana sy fanaingoana ny Network Manager, ny Network Interface, ny resolv.conf, ny System Proxy ary ny Browser, ny Repositories miaraka amin'ny lakileny tsirairay avy izahay ary hanatanteraka ambaratonga samihafa amin'ny fikojakojana sy fanavaozana ny Operating System. Amin'ity fizarana faharoa ity dia hiresaka dingana vitsivitsy ilaina isika rehetra mba hanatsarana ny toetrantsika Tontolo iainana Desktop o Tontolo iainana Multi-Desktop en fizarana GNU Linux DEBIAN ao amin'ny kinova 8 Jessie (Stable) na 9 Stretch (Testing), na iray miorina aminy.
Fanamarihana 1: Tontolo iainana Multi-Desktop manondro rehefa manana tontolo manodidina ny Desktop 2 na maromaro ianao amin'ny a Rafitra miasa GNU / Linux. Ary ny tolo-kevitra (fonosana hapetraka) omena etsy ambany dia natao mora ny fametrahana, fampidirana ary fitoniana amin'ny tontolon'ny Desktop 2 na maromaro. Na izany aza, izany dia atolotra ho an'ny mpampiasa antonony na mandroso fotsiny.
Fanamarihana 2: Raha mampandre anao izany ny Rafitra miasa olana amin'ny famakiam-boky na rakitras tsy ho afaka mametraka / manavao fonosana sasany, mifidiana eo: manaiky - tsy manaiky - fivoahana (y / n / q) ny safidy mamela aza manala na midina fonosana mifanohitra mba hialana amin'ny olana lehibe na tsy azo sitranina, fa raha mieritreritra ianao fa manana ny traikefa, dia nanohy nanaiky ny zava-drehetra tamim-pitandremana aho, ary nahita ny hafatra fampitandremana console hanaraka azy ireo!
Fanamarihana 3: Fitsinjarana DEBIANINA 8 mety ho madio na mifangaro, izany hoe, tsy misy afa-tsy fitoeran'ny DEBIANINA 8 na mitahiry Repositories an'ny DEBIANINA 9. Ity dia azo atao nefa tsy atoro anaosatria io dia atolotra ho an'ny mpampiasa salantsalany na mandroso ihany. Ny DEBIANINA 9 madio dia tsara kokoa noho ny DEBIAN 8 mifangaro.
Fanamarihana 4: Sambany ampiasao ity Torolàlana momba ny fametrahana soso-kevitra izany apetaho tsirairay avy eto amin'ity lisitra ity ny fonosana tsirairay ary hizaha ny fahombiazan'ny tsirairay amin'izy ireo mametraka ny anarana ao anaty boaty mitady (karoka) de Pejy ofisialy DEBIAN Packages. ny araho ireto toro-hevitra iretos ho lasa a ianao amin'ny farany Mpampiasa antonony na mandroso miaraka amina baiko fonosana sy famahana olana.
FAMONJENA AMIN'NY FAMONJENA, FAMONJENA SY Fametrahana fonosana hafa:
FAMONJENA NY fametrahana ny tontolo DESKTOP GNOME:
Raha DEBIANINA 8 madio io dia ataovy ihany koa ny baiko:
Fampiharana EXTRAS HO AN'NY GNOME:
FAMONJENA FAMASINANA NY TONTOLO IAINANA MATE DESKTOP:
FAMONJENA FAMASINANA NY TONTOLON'NY CINNAMON DESKTOP:
FAMONJENA NY fametrahana ny tontolo XFCE DESKTOP:
FAMONJENA NY fametrahana ny tontolo manodidina an'i DESKTOP LXDE:
# Mametraka fotsiny raha madio DEBIANY 8.
FIVORIANA hametrahana ny manodidina ny DESE DESKTOP KDE 4/5:
Ho an'ny KDE 4 ao amin'ny DEBIAN 8:
Ho an'ny KDE 5 ao amin'ny DEBIAN 9:
Fampiharana EXTRAS ho an'ny KDE 4/5:
MPITONDRA FIVORIANA MOMBA NY MPIVAROTRA:
FEPOTRA ALALANA TAMIN'NY tontolo iainana ho an'ny mpampiasa:
Raha DEBIANINA 8 madio izy dia mihazakazaha avy hatrany ny baiko:
Raha DEBIANI 9, dia alao ny command prompt:
FAMONJENA FAMPANDROSOANA NY FOMBA HARDWARE:
Avy eo tanteraho ny baiko: sensor-mamantatra
Ary manorata ENY amin'ny safidy rehetra.
PACKAGES BROWSER INTERNET GREGLE REPOSITORIES:
Manantena aho fa izany fanangonana am-pitandremana sy mifantina ireo fonosana naroso mifanaraka amin'ny filan'izy ireo ary avelao izy ireo manana rafitra miasa 8/9 DEBIAN more feno, milamina ary voavolavola. ny tapany fahatelo amin'ny Torolàlana fametrahana fametrahana dia ahitana ireo fonosana tsara indrindra natolotra ho an'ny:
FAMPIHARANA SY MPITARIKA AUDIO
Pirinty sy fangatahana scanner
FITADIAVANA AMIN'NY WINDOWS (NETWORKS SY HARDWARE)
INTEROPERABILITY AMIN'NY WINDOWS (SOFTWARE)
FAMPAMONJANA JAVA MAIMAIMPOANA
ADOBE FAMONDRANA PRIVATIVE
FAMPIANARANA ETHERNET SY CONTROLLERS - WIRELESS
Fampiharana horonan-tsary sy mpamily
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Torolàlana momba ny fametrahana post DEBIAN 8/9 - 2016 - Fizarana II
Tena kamo ny mampiasa debian….
bebe kokoa raha ao amin'ny sampana miorina, tsapako fa ny zavatra mahaliana dia ny sisiny.
Na eo aza izany, ny zava-misy mahita tsipika marobe hametrahana zavatra dia mampahatahotra ahy ny mijery azy ary tsy te hampiasa azy akory aho.
Mety nisy olona natao hamorona script miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo izay manana izany distro izany, zavatra hampiasana a ./install_gnome ary hapetraka ohatra ny birao, tsara raha ny fahitako azy.
1.- Ny fampiasana tsy miovaova (sid) dia soso-kevitra ihany raha manam-pahaizana ianao. Tsara lavitra sy tsara indrindra ny fampiasana fitiliana hatrany.
2.- Ireo fonosana atolotra rehetra ireo dia tsy apetraka ho automaton, tokony hampianatra ireo vaovao izy ireo izay fonosana tokony ho fantany tsara rehefa misy olana na fanatsarana ny Rafitra Miasa, mampisaraka azy ireo amin'ny alàlan'ny asany. Na izany aza azonao ampidirina anaty script sy voila ireo tsipika ireo, saingy tsy tokony hasiako hevitra izany.
Dayane Qu dia hoy izy:
Manomboka amin'ny fonosana fototra ho an'ny fanangonana, fametrahana ary ilaina amin'ny safidy tontolo iainana. Lehibe, mpitari-dalana tsara. Mamela asa fikarohana lehibe ianao ho an'ireo vao manomboka na efa za-draharaha.
Ny zavatra ratsy manaloka ny mpitari-dalana anao dia ny tolo-kevitr'ireo manana, raha manomboka amin'ny fanolorana an'i Debian na fanaovana torolàlana hahatakarana ny fahafaha-manamboatra azy io dia tokony ho mahatoky amin'ny filôzôfia misy rindrambaiko maimaim-poana isika ary holavina ireo manana. , izay manaisotra ny mpampiasa ny fahalalahana nolovain'Andriamatoa Murdock taminay.
Valiny tamin'i Dayane Qu
Azoko tsara ianao! Na izany na tsy izany dia tolo-kevitra fotsiny izy ireo ary indraindray tsara ny mahafantatra ireo safidy mifandraika amin'ny GNU / Linux rehefa manjaka ny tsy fahampian'ny fahaizana!
Hatramin'ny dingana voalohany miaraka amin'ny penguin distro dia nomeko azy ireo avy amin'ny tanan'ny mpitari-dalana toy ireto. Fahatsiarovana inona no nentiko namaky fa ny fonosana toy ny 'ooo-thumbnailer' dia mbola mitifitra ihany.
La-bu-ra-zo !!! Miarahaba anao Jose.
Fonosana tsotra izay manao topy maso ny antotan-taratasinay ao amin'ny Nautilus Explorer, saingy tsy apetraka fotsiny ao anaty Distros marobe izany ary mahatonga ny mpampiasa mahazatra manana fahitana mitaha amin'ny Windows milaza fa tsy toa an'i Windows izany. Ary izany no momba ilay Torolàlana.
Amin'ity tranga manokana ity dia mampiasa DEBIAN Testing miaraka amin'ny KDE5 - Plasma aho ary apetrako tanteraka ireo fonosana sy fomba fanao voalaza ao amin'ity Torolàlana momba ny fizarana 3 ity ary tsapako fa manana Distro manokana tena nohavaozina sy tsy miovaova aho! Manana mpizara manokana namboarina toa izao aho.
Ary ny tsara indrindra, amin'ny fitandremana tsara sy amin'ny fampiasana DEBIAN maharitra dia azonao atao ny mametraka ny tontolon'ny birao rehetra sy ny mpitantana ny session fidirana indray mandeha, ary hizaha toetra ny tsiron'ny linux ao anaty Distro tokana. Manana ny laptop-ko manokana toa izao aho.
Ny Torolàlana dia namboarina mba ahafahana manao izany miaraka amin'ny maridre faran'izay kely indrindra amin'ny lesoka parcel.
Marina izany, ny topi-maso .odt (sy ny mpiara-miasa Libreoffice) dia zavatra jerena ary ilaina ambonin'ny zavatra hafa rehetra.
Azafady, fanontaniana roa Jose: Rehefa miteny tsara ianao / * sy mampiasa DEBIAN milamina dia azonao atao ny mametraka ny tontolon'ny birao rehetra * / Tsy hotoloranao azy ao amin'ny Debian Testing ve izany? Heverinao ve fa ny fepetra tsara raisina mba hisorohana ny fampifangaroana configurations ao an-trano dia ny fampiasana solonanarana hafa isaky ny tontolo Desktop?
Malahelo an'i OpenBox aho 🙁 nanana olana tamin'ny wifi foana aho teo am-panokafana: /
Fa mpitari-dalana tena tsara izy, arahaba!
Izaho manokana dia nampiasa DEBIAN 8 Multi-tontolo iainana lavorary tsy nisy karazana tsy fandriam-pahalemana, saingy satria namboariko tsara tamin'ny lafiny tanana ny lafiny tsirairay amin'ny haavon'ny fonosana napetraka. Raha ampidirinao ireto andalana 2 ireto dia hilamina tsara ny tontolo iainana rehetra:
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ versiondebian main contrib tsy andoavam-bola
deb http://security.debian.org/ versiondebian / manavao ny contrib lehibe tsy maimaim-poana
Fa raha ampidirinao etsy ambany ireo tsipika naseho etsy ambany, na ireo toeram-pitahirizana fonosana maoderina kokoa (amin'ny dingana fitsapana) ampidirinao dia mety hanjary tsy marin-toerana izy io noho ny olan'ny fiankinan-doha tsy ampoizina.
Andalana toy ny:
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ versiondebian-manavao ny contrib lehibe tsy andoavam-bola
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ versiondebian-backports contrib lehibe tsy andoavam-bola
Ampidiriko daholo izy ireo, tamin'ny voalohany dia sahirana aho saingy nataoko hianarana momba ny parsela sy ny fiankinan-doha aminy, na amin'ny DEBIAN 8 na 9. Raha te hianatra ianao ary tianao ny risika, afangaro, raha tianao ny fitoniana sy filaminana, aza manao an'izany.
Ao amin'ny DEBIAN 9 dia mety hisy hatrany ny tsy fandriam-pahalemana noho ny fanavaozana tsy tapaka ny fonosana, fa raha sahy ianao dia hianatra zavatra betsaka momba ny fametrahana rafitra tsara eny an-tànany!
Misaotra betsaka anao amin'ny lesona. Tsy mahita fomba hametrahana ny Gnome Software Center ao amin'ny Debian 8 araka izay itondran'i Ubuntu Gnome aho. Izy io dia ny fametrahana amin'ny solosaina findainy ho an'ny olona tsy dia mandro amin'ny solosaina sy ny Internet. Hametraka Debian 8, LibreOffice, Firefox aho, hikirakira Thunderbird ary ny zavatra hafa kely, fa te hanoro azy fomba iray hametrahana fonosana mora foana aho ary hitako fa mety ho azy ny Gnome Software Center. Tsy azo atao ve ny mametraka azy amin'ny Debian 8? Misaotra mialoha. mahafaly
Josemari. dia hoy izy:
Valiny tamin'i Josemari.
Torolàlana momba ny fametrahana post DEBIAN 8/9 - 2016 - Fizarana III
DEBIAN Post Installation Guide 8/9 - 2016 - Fizarana I